इस्राएलका भाषा। कुन भाषाहरु इस्राएलका सुनाइन्छ?
इस्राएलका क्षेत्र मा विभिन्न जातीय समूहका प्रत्येक अन्य प्रतिनिधिहरु संग प्राप्त गर्न। यरूशलेम मार्फत हिड्ने, को पर्यटक एक धार्मिक यहूदी एक टोपी र कालो लुगा लगाएका, साथै एक अरब राष्ट्रिय रूमाल रूपमा भर आउन सक्नुहुन्छ। के भाषाहरु मा आज इस्राएलका सुनाइन्छ?
हाल, इजरायल, दुई मा आधिकारिक भाषा - अरबी र हिब्रू छ। साथै तिनीहरूले हर एक ठाँउ र इटालियन छन्, फारसी, रोमानियाली, इथियोपियाली, अंग्रेजी र धेरै अन्य। हिब्रू5लाख मान्छे बोल्न। यो इस्राएलका मुख्य भाषा हो। तथापि, हिब्रू को इतिहास भर दैनिक संचार को भाषा भएनन्। बिस्तारै, त्यो धार्मिक पदहरू, संस्कार, साथै पुस्तक सारियो। एक कम हदसम्म अरबी वितरण। तथापि, इजरायल दुवै भाषा, अरबी र हिब्रू जस्तै, सार्वजनिक हुन्छन्।
जहाँ इस्राएलका इथियोपियाली?
को Falasha - इजरायल मा पहिलो पटक आउन जो मान्छे, अक्सर यहूदीहरूको दृष्टिकोण इथियोपियाली यहूदीहरूको जातीय समूहसँग बैठक पछि नाटकीय परिवर्तन कि स्वीकार। यो उत्तर र इथोपिया को उत्तर-पश्चिम बस्ने एक यहूदी समुदाय हो। इस्राएलका बोली भाषामा रुचि भएकाहरूलाई, सबै भन्दा साधारण को एक एक इथियोपियाली छ कि छक्क हुनेछ। Falasha आफूलाई राजा सुलेमानले र शबा को रानी को सन्तानहरू विचार गर्नुहोस्। आधिकारिक तिनीहरूले यहूदीहरूको रूपमा बरु ढिलो, मात्र 1973 मा मान्यता थियो।
तिनीहरूले Israeli नागरिकता हकदार थिए त थियो। तर, यो इथियोपियाली अधिकारीहरु द्वारा सराहना थिएन। त्यसै वर्ष, एक व्यवस्था निषेधित कूशी देश छोड्ने कि जारी थियो। समुदायको केही सदस्य र भाग्न सक्षम भए तापनि तिनीहरूलाई धेरै बाटो मा मृत्यु भयो। मध्य-eighties मा, Israeli अधिकारीहरूले प्रतिबन्ध छल्न र अफ्रीका देखि यहूदीहरूले ल्याउन प्रयास गर्ने निर्णय गरे। प्रतिज्ञा गरिएको देशमा धेरै अपरेसन पछि बारेमा 35,000 इथियोपियाली यहूदीहरूले ओसारपसार थिए। यसरी मा, इथियोपियाली भाषाहरु के अब इजरायल छ बोलिएका छन्।
शिक्षा को Israeli मंत्रालय जो जो अरबी बोल्न विद्यार्थी लागि पाठ्यक्रम विकास गरिएको छ अरबी, को एक विशेष विभाग छ। तिनीहरूलाई को भन्दा हिब्रू सिकाइएको भन्ने तथ्यलाई बावजुद, तिनीहरूलाई थुप्रै एकदम राम्रो कुरा छैन। यो बिल अनुसार, पहिलो कक्षा देखि यहूदी विद्यार्थीहरूले अरबी भाषा र अरब सिक्नुपर्छ, बारी मा, हिब्रू सिक्न आवश्यक छ। अरबी देश मा शान्ति कायम गर्न एक दृश्य संग सहित इस्राएलका आधिकारिक भाषा भयो। भाषा बिज्ञान द्वारा विशेषज्ञहरु इस्राएलका चासो गर्न तर्क अरबी भाषा अध्ययन हाल को वर्ष र विशेष व्यवस्था बढ्छ को परिचय बिना।
इस्राएलको संसद बारम्बार इस्राएलका आधिकारिक भाषाहरूको सूची मा रूसी भाषा को परिचय मा एक मस्यौदा कानून प्रस्तावित गरेको छ। यी बिल नयाँ अगस्ट 2008 मा प्रस्तावित गरिएको छ। सबै भन्दा साधारण भाषा, Israeli विद्यालय सिकाइएको छ जो - यो अंग्रेजी छ। र अक्सर अध्ययन र दोस्रो विदेशी भाषा, सामान्यतया फ्रान्सेली वा अरबी। 2008 देखि उहाँले एक रूसी छ। तथापि, इजरायल मा रूसी वक्ता को सबै भन्दा - यो पुरानो पुस्ता छ। तर, धेरै रूसी थप एक क्षेत्रीय भाषा जस्तै छ भन्छन्। हिब्रू - यो बावजुद मा रूसी प्रेस, साथै मिडिया को कुल संख्या इस्राएलका आधिकारिक भाषा मा प्रकाशित छ के नजिकिंदै।
धेरै भ्रमण संचालक तिनीहरूले इस्राएललाई एउटा यात्राको समयमा संचार समस्या छैन भनेर आफ्नो ग्राहकहरु प्रदान गर्नुहोस्। यो यस देश को कुल जनसंख्या को लगभग 20% रूसी को धेरै राम्रो आदेश छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ। हालैका दशकहरूमा, यो देश रूसी व्यावहारिक परिवार थियो जसको लागि सोभियत संघ, एक लाख यहूदीहरू बारेमा सारिएको छ। हिब्रू - तर, दैनिक संचार जवान मानिसहरू नयाँ पुस्ता इस्राएलका राज्य भाषा प्रयोग गर्न रुचि।
हिब्रू को इतिहास देखि
इस्राएलका आधिकारिक भाषा लामो इतिहास छ। शब्द "हिब्रू" शाब्दिक "हिब्रू" को रूपमा अनुवाद गरिएको छ। धेरै नाम अपेक्षाकृत नयाँ छ, 100 वर्ष पहिले देखियो। त्यो समय सम्म, यहूदीहरूले पवित्र जिब्रो भनिन्छ आफ्नो भाषा। धेरै geologists हिब्रू परमेश्वरको परमप्रभुले प्रमोदवनमा आदम संग conversed भन्ने विश्वास गर्छन्। तथापि, वैज्ञानिकहरूले धेरै सावधान आफ्नो निष्कर्ष हो। तिनीहरूलाई अनुसार, हिब्रू - एकदम प्राचीन भाषा हो। सबैभन्दा पुरानो 3000 साल को अर्डर, इस्राएलका क्षेत्रमा फेला परेन जो, हिब्रू मा inscriptions को उमेर। को XII शताब्दी ई.पू. मा - तर, वैज्ञानिकहरूले सबैभन्दा प्राचीन पदहरू पनि पहिले लेखिएका थिए भन्ने कुरामा विश्वस्त छन्। यो समय छ र हिब्रू इतिहासको मूल हुन मानिन्छ। पुरातन यहूदीहरूले फेनोसियन पत्र प्रयोग। जाहिर छ, तिनीहरूले कनान भनी सिकाए थिए।
वैज्ञानिकहरु फेनोसियन वर्णमाला को पत्र पुरातन मिश्री हाइरोग्लिफ्स देखि descended छन् भन्ने विश्वास गर्छन्। म त्यो हाम्रो समय को सबै अक्षरहरू Originate गर्नुपर्छ के आश्चर्य - यो हिब्रू छ, ग्रीक, ल्याटिन, अरबी। क्यूनीफर्म पक्रेको छैन। यो Phenicia को उत्तर विस्तार भएको थियो। मिति, हिब्रू पत्र, एक धेरै परिमार्जन फारममा albeit, टोरा लेख्न प्रयोग गरिन्छ। चतुर्थ ग। ई.पू.। ई। हिब्रू जीवित भएनन्। यस समयमा, त्यहाँ विभिन्न धार्मिक पदहरू को उच्चारण को हानि को एक गम्भीर जोखिम थियो। छैटौं शताब्दीका ट्रान्सक्रिप्सन सिस्टम, शब्द को उच्चारण निर्दिष्ट जसमा विकास गरिएको छ। धन्यवाद यी उपाय गर्न हिब्रू भाषा हाम्रो दिन आए।
इजरायल र हिब्रू बारेमा रोचक तथ्य
त्यसैले, हामी इस्राएलका बोली भाषा को प्रश्नको जवाफ विचार छ। अन्य के तथ्य यो देश को संस्कृति थाहा प्राप्त गर्न चाहने ती रुचि हुन सक्छ? इस्राएलको राजधानी यरूशलेममा छ। यसको क्षेत्र मा मुख्य सार्वजनिक संस्थाहरू छन्। तर, देश को मुख्य व्यापार केन्द्र - यो तेल अवीव छ। त्यो विभिन्न निगमों र अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य दूतावास को जहाँ मुख्यालय छ। यो धेरै देशहरूमा स्वीकार छ रूपमा इस्राएलमा सप्ताह, सोमबार सुरु, र आइतबार छैन। शनिबार, जीवन लगभग रोक्छ। तर, स्थानीय बासिन्दा अहिले विश्राम दिन यो 15 वर्ष पहिले थियो कडाई रूपमा अवलोकन छ भन्छन्। केही पसलहरु अझै पनि खुला रहने। तिनीहरूले इस्राएलका तपाईं जीवन बिताउन र वस्तुतः हिब्रू गर्न सक्छन् भन्छन्। पनि यहाँ जन्म थिए ती इजरायली, तपाईं बुझ्न सक्षम हुनेछ।
हिब्रू - तथापि, अर्डर काम प्राप्त गर्न इस्राएलका राज्य भाषा को ज्ञान आवश्यक छ। यो एक सरल भाषा हो। उहाँले धेरै संरचित र तार्किक छ। यसको मुख्य विशेषता यो कुनै स्वरवर्णको छन्, र शब्द बाँकी दायाँ देखि लेखिएका छन् भन्ने छ। स्थानीय संस्कृति थाहा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ धेरै, इस्राएलका बोली भाषामा रुचि छन्। हिब्रू सिक्न सजिलो। सुरुमा, यो शुरुवात भन्दा अन्त देखि पुस्तकहरू खोल्न thrust हटाउन गाह्रो छ। हिब्रू मा, शब्द पर्याप्त सानो छ, र क्रिया4पटक रूसी भाषामा भन्दा कम छ। वास्तवमा, हिब्रू व्याख्या गर्न सिक्न त्यहाँ एक दैनिक कुराकानी अभ्यास छ भने यो बारेमा6महिना लाग्छ।
"कोच" - शब्द "शिक्षक" को लागि एक पर्यायवाचीशब्दप्रविष्टगर्नुहोस्? को अवधारणा को प्रयोग को मान Subtleties र सुविधाहरू
रूसी भाषामा खण्ड
"पुरानो चरा": phraseologism मूल्य, अर्थ, पर्यायवाची र उपयोग को उदाहरण
कसरी मानिसहरू लागि "डी" मा केटा रोचक नाम नाम
प्रत्यक्ष वाणी उदाहरण प्रदान गर्दछ। प्रत्यक्ष भाषण संग एक वाक्य कसरी बनाउने
त्रुटिहरू को सार। त्रुटि कसरी मिलाउने? त्रुटि हो ...
चलचित्र "दुःस्वप्न Elm सडक मा" को समीक्षा: अभिनेताहरु, प्लट, sequels
सिफलिस: रोग र उपचार को एक लक्षण
दबाइको ओक्सोलिन विन्टन्ट। प्रयोगको लागि निर्देशन
वैज्ञानिकहरूले ताजा पानी नुन पानी बारी सौर ऊर्जा प्रयोग गरेका छन्
हामी अपमान प्रतिक्रिया वा के झूट बारेमा स्थिति हुनुपर्छ?
को माइक्रोवेव मा डेसर्ट। सरल व्यञ्जनहरु
छोराछोरीलाई किन राती सुत्न छैन?
सोफा "राइन" कुना: गुणात्मक विशेषताहरु र समीक्षा
आत्माको Nikolay Leonidovich बख्तरबंद वाहन को सोभियत डिजाइनर: छोटो जीवनी